पाँच वर्षको छोरा बचाउन हिमाली सिंहसँग जुधिन यी आमा! - Dainik Online Dainik Online
पाँच वर्षको छोरा बचाउन हिमाली सिंहसँग जुधिन यी आमा!
प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७८, सोमबार २ : ४०
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यकी एक महिलालाई यतिबेला विश्वभरबाट प्रशंसा मिलिरहेको छ। कारण उनले आफ्नो पाँच वर्षको छोरा बचाउन हिमाली सिंहसँग जुधिन। पश्चिमी लस एन्जलसस्थित सान्टा मोनिका हिमाली क्षेत्रमा बस्ने ती महिला र बालकको नाम भने खुलाइएको छैन। बीबीसीका अनुसार जब बालक घर बाहिर खेलिरहेका थिए उनका आमाले उनलाई टोकेर घिसार्दै लगेको देखेका थिए।
त्यसपछि ती महिलाले सिहंलाई खाली हात मुक्का बनाएर हिर्काको हिर्काई गरिन जबसम्म त्यो सिंहले बालकलाई छोडेन। क्यालिफोर्नियास्थित फिस एन्ड वाइल्डलाइफका प्रवक्ता क्याप्टेन प्याट्रिकका अनुसार बालकको टाउको र छातीमा चोट लागेको भएता पनि हाल बालकको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भइसकेको छ।
महिलाले जब सिंहलाई लखेट्न सफल भइन् त्यो सिंह त्यही वरिपरी घुमेको देखेपछि त्यसले अरुलाई पनि आक्रमण गर्नसक्ने आशंकाले त्यसलाई मारिएको सीबीएस न्युजले जनाएको छ। हाल खाली हात बालक छोराको ज्यान जोगाउने महिलाको साहसलाई सबैले सलाम गरिरहेका छन्। कोहीले आफूभन्दा पनि धेरै सन्तानको माया लाग्ने रहेछ भनिरहेका छन्।